अपत्यारिलो सत्य : बालगुरू आदित्यनाथको अद्भुत चमत्कार – Chitwan Post
अपत्यारिलो सत्य : बालगुरू आदित्यनाथको अद्भुत चमत्कार
प्रकाशित मिति: मङ्लबार, बैशाख १०, २०७६
अनेकौँ महापुरूष, योगी र महामानवका जीवनगाथा पत्याउनै नसकिने दैवीशक्तिका रहस्यले भरिपूर्ण भएको पाइन्छ । हुन पनि ईश्वरीय कृपा नभईकन पञ्चत¤वले बनेको देह पिँजडामा शुद्ध, बुद्ध र मुक्त आत्माको निवास हुन सक्दैन । त्यस्तो आत्मा नबसीकन मान्छे शक्तिशाली बन्दैन । सत्य र कल्याण मार्ग देखाउँदै आएको उज्यालो इतिहास हामीसामु छ । राम, कृष्ण र बुद्ध त शास्त्रमा वर्णन गरिएका ईश्वरीय अवतार नै भइहाले, विवेकानन्द र महात्मा गान्धीजस्ता सामान्य मानवले पनि इतिहासको एउटा कालखण्डलाई प्रभावित तुल्याएकै थिए । कसैले नपढाईकनै आश्चर्यजनकरुपमा नेपाली, अंग्रेजीलगायत विभिन्न भाषामा लेखपढ गर्न थालेदेखि नै बालक आदित्य दाहाललाई यस्तै भविष्यवेत्ताका रुपमा धेरैले चिन्दै आएका थिए । अब भने उनको परिचय ‘कलियुगको आदित्य ज्योतिपथ’का लेखकका रुपमा समेत थपिएको छ । उपलब्ध तथ्य र जानकारीअनुसार सर्र्वािधक कम उमेरको व्यक्तिले रचना गरेको यो नै विश्वको पहिलो पुस्तक हो ।
पुस्तकसँग अरु पनि आश्चर्य जोडिएको छ । केवल नौ वर्षका लेखकले लेखेको पुस्तक वैदिक ग्रन्थजस्तो प्रज्ञामय छ । आध्यात्मिक रहस्यैरहस्यले भरिएको यस पुस्तकका लेखक कहिल्यै विद्यालय गएका छैनन् र कहिल्यै पनि कुनै पनि गुरूबाट अक्षर सिकेका छैनन् । लेखपढै नगरी, कसैले सिकाउँदै नसिकाई यत्तिको गहिरो पुस्तक यो कलिलो उमेरमा नेपालमा मात्रै होइन संसारमै कहीँ पनि कसैले आजभन्दा अघि निकालेको थिएन ।
हो, यी कान्छा लेखक बालज्ञानी मुखले बोल्न सक्दैनन् । सामान्य नजरमा उनको शारीरिक अवस्था अपूर्ण किसिमको छ । हातखुट्टा सबल व्यक्तिका जस्ता समर्थ छैनन् । शारीरिक संरचना पनि परिपूर्ण छैन । तर, उनको ज्ञान र ध्यानको गहिराइ भने अद्भुत, अकल्पनीय र अलौकिक किसिमको छ । बालज्ञानी आदित्यका परिचयका आयाम अनेक छन् । जीवन र व्यवहारका कुनै पनि विषयमा उनको ज्ञान अद्भुत किसिमको छ । ध्यान, ज्ञान र साधनाका विषयमा बालज्ञानीको अन्तप्रज्ञा बडो विचित्रको देखिन्छ । आठ–नौ वर्षको बालकले संसारभरि कतै नदेखिएको र नसुनिएको विलक्षण किसिमको मन्दिर बनाउन सक्छ भनेको सुन्दा जोकसैलाई अचम्म लाग्छ । तर, यो साक्षात् सत्य हो । नामकरणसमेत आफैँले गरेको यो अद्भुत मन्दिरको नाम हो, त्रि–गजुर महादेव मन्दिर । मन्दिर निर्माण विषयमा बालज्ञानी आदित्यको परिपूर्ण कौशल देख्दा लाग्छ, उनी अथाह आध्यात्मिक क्षमताका धनी हुन् र यो उनको अलौकिकताको एउटा झलकमात्रै हो ।
यतिखेर यस त्रि–गजुर शिवालयको चर्चा सर्वत्र छ । अत्यन्तै दुर्लभ ढाँचामा बनेको यस मन्दिरको सम्पूर्ण अवधारणा र डिजाइन बालज्ञानी आदित्यकै हो । सुन्दा अपत्यारिलो लाग्छ, तर सत्य आफ्नै आँखाले देखेपछि विश्वस्त हुनैपर्छ । मन्दिरहरु धेरै बन्छन् । त्यसै पनि राजधानी काठमाडौँ मन्दिरैमन्दिरको सहर हो । तर, यो मन्दिर वास्तवमै अभूतपूर्व छ । आध्यात्मिक ऊर्जाले सुसम्पन्न मन्दिर बनाउने बालज्ञानीको दैवीय कौशल र संकल्पना यसलाई हेरेपछि स्वतः उजागर हुन्छ । शिवात्माको तन्त्र विद्यादेखि मृत्यु मोक्ष प्राप्त हुने स्थल, हर अशान्तिलाई शान्त राख्ने केन्द्र, हर अशक्त बिरामीको मलम यस शिवालयको माटोमा छ । मात्र, शुद्ध भावले यस क्षेत्रमा प्रवेश गरे हर समस्याको सरल उत्तर पाउने यो पुण्यभूमि सारा जगत्मा चिनिने छ ।
झापाका शेषराज दाहाल करिब एक दशकअघि काठमाडौँ झरेका थिए । नागरिक उड्ययन प्राधिकरणमा जागिर खान थालेपछि उनले ०६४ सालमा ईश्वरा गुरागाईंसित घरजम सुरू गरे । शेषराज र ईश्वराका पहिलो सन्तानका रुपमा ०६७ साल, साउन ७ गते आदित्य जन्मिए । आदित्यको जन्मकुण्डली उनकै मावलका हजुरबुबा हरिप्रसाद गुरागाईंले बनाइदिएर चार वर्षपछिमात्रै यसलाई उघारेर हेर्नु भनेका थिए अरे । आदित्यको शरीर लौकिकै छ, मस्तिष्क मात्र अलौकिक किसिमले प्रस्तुत हुँदैछ ।
२०६७ मा जन्मेका उनी आगामी साउन ७ गते ९ वर्ष पूरा हुँदैछन् । आमा ईश्वराका अनुसार जन्मँदा साढे ३ किलो तौल भएका आदित्य पूर्ण स्वस्थ थिए । ३३ महिनाको हुँदा उनी त्यसैगरी हुर्किए जसरी आमबालबालिका हुर्किन्छन् । अरुजस्तै हाँस्थे, बोल्थे, उछलकुद गर्थे । त्यसपछि अनायास गल्न थाले । हातखुट्टा लुला हुँदै गए । अरुको सहाराबिना बस्न पनि नसक्ने भए । पहिले पटर–पटर बोलिरहने उनी बिस्तारै बोल्न पनि छाडे । बाँकी रह्यो केवल मुस्कान ।
सामान्य बालकको कुरा गर्ने हो भने यो हाँसखेल, खानपिन, निद्रा–आराम र रामरमितामै बित्ने अबोध समय हो । तर, यति सानो उमेरमा आदित्यले देखाएको शक्ति र सामथ्र्य हेर्दा उनमा विवेकानन्द र बालक ध्रुवको झझल्को आउँछ । उनबाट प्रकटित ज्ञान, विचार, दर्शन र आध्यात्मिक चेत हजारौँ वर्ष तपस्या गर्ने ऋषिमहर्षि र ज्ञानी महापुरूषहरुको भन्दा कत्ति कम छैन । बोल्न, हिँड्डुल गर्न नसक्ने दाहालले लिखितरुपमा अद्भुत खालका धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन् । विद्यालय नगएका र अक्षरसमेत नचिनेका दाहालले एकाएक गम्भीर विषयलाई लिखितरुपमा अभिव्यक्ति गर्न थालेपछि दाहाल चर्चामा छन् । झन्डै चार वर्षको उमेरमा उनको यस्तो प्रतिभा प्रस्फुटन भएको थियो । त्यसपछि उनका धेरै अनुयायी बन्दै गएका छन् ।
आदित्यमा २०७१ साल असार २५ गते अलौकिक शक्ति प्रवेश भएको थियो । सो दिनलाइ आदित्यले निद्राबाट ब्युँझिएको दिन भनेका छन् । अलौकिक शक्ति देखिनुभन्दा ११ महिनाअघिदेखि उनको स्वास्थ्य स्थिति खस्कन थाल्यो । यतिबेला उनी न त बोल्न सक्छन् न त हिँड्डुल गर्न नै । कहिल्यै स्कुलसम्म नटेकेका आदित्यले कसैले सोधेको जुनसुकै प्रश्नको जवाफ हातले लेखेर दिने गरेका छन् । कसैले सहारा दिएको भरमा अडिने उनमा शारीरिक क्षमता निष्क्रिय भए पनि मानसिक क्षमता भने चामत्कारिक छ । कसैले सोधेको जुनसुकै प्रश्नको जवाफ हातले लेखेर दिने आदित्यमा विश्वका हरेक कुराको ज्ञान छ । वेद र उपनिषद्का श्लोक कण्ठै भएका आदित्यले जापानी, चिनियाँ, कोरियन, अंग्रेजी, संस्कृतलगायतका भाषामा लेखिसकेका छन् । आफूमा दैविक शक्ति भएको बताउने आदित्यले बालगुरूका रुपमा दिव्योपदेश दिँदै आएका छन् । ज्ञान, विज्ञान, राजनीति, दर्शन, देशभक्ति तथा जीवन–जगत्का यावत् गुढ रहस्यहरु कहिल्यै विद्यालयको अनुहार नदेखेको मात्रै होइन, अक्षरारम्भसमेत नगरेका बालकको मुखबाट अनायास अभिव्यक्त हुनु चानचुने विषय होइन ।
जसरी बुद्ध पुरूषहरुबाट लामो समयको ध्यान र तपस्यापछि प्रकट भएको शक्तिलाई बुद्धत्व भनिन्छ, आदित्यले आफूमा प्रकट भएको अद्भुत शक्तिलाइ ब्युँझिएको दिनको उपमा दिए । आदित्यलाई भेट्ने धेरैले आफ्ना जिवनका ससाना समस्याबारे प्रश्न राख्ने गरेका छन् । आदित्यले सबैका जिज्ञासा मेट्ने गरे पनि उनको आकांक्षा त्यतिमा मात्र सीमित छैन ।
आदित्यले आफू को हो भन्नेबारे केही भनेका छैनन् । उनको अलौकिक शक्ति र अहिलेदेखि नै खेलेको जगत्गुरूको भूमिकाले उनको जन्म एउटा साधारण संयोगभन्दा बाहिरको घटना भएको सम्भवतः भोलिको इतिहासले स्वीकार्नेछ । आदित्यले आफूले नदेखको, नसिकेको, नसुनेको विषयमा पनि जवाफ दिन्छन् । उनी तीक्ष्ण दिमागका हुन् । बाल मस्तिष्क विकासको हालसम्मको अनुभवलाई यसले सीधै चुनौती दिन्छ, जुन वैज्ञानिकभन्दा पनि प्यारानर्मल क्षमतामा पर्छ । आश्रममा आउने जोकोहीको मन पढ्न सक्ने अद्भुत सामथ्र्य र शक्ति उनमा विद्यमान छ । कसैको कपटपूर्ण मन भए पनि त्यसलाई समेत सकारात्मक सन्देश दिएर आश्वस्त पार्ने क्षमता पनि गुरूमा देखिन्छ । सूत्रबद्ध र संक्षिप्त उनका हरेक सन्देश आफैँमा मन्त्रजस्ता छन् । बालज्ञानी गुरूदेवले अपत्यारिला तर शाश्वत सत्यले भरिपूर्ण मन्त्रमय विचार र दार्र्शिनक भाव हामीमाझ नित्य निरन्तर प्रवाहित गरिरहेका छन् ।
उनलाई अरुको सहायताबिना हिँड्डुल गर्नु त परै जाओस्, बस्नसमेत दुवैतिर सिरानी राखेपछि मात्र सम्भव हुन्छ । उनका हात अप्ठ्यारो गरी चल्छन् । लेख्नका लागि कलम समाउनसमेत गाह्रो हुन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा उनका नित्यकर्म अरुद्वारा नै सम्पन्न गराउनुपर्छ । संसारका नाम चलेका अस्पतालले उनको जाँच गर्दा पनि कुनै समस्या देखेनन् । यो झनै रहस्यको विषय हो । गुरू आदित्यको यस्तो शारीरिक अवस्था, तर अन्तरमा लुकेको अथाह ज्ञानराशि आफैँमा खोजको विषय हो । सांसारिक आँखाले हेर्दा कमजोर र अशक्त देखिने शरीरभित्रको यो दिव्यज्ञान र चमत्कारको रहस्य के हो ? अस्तित्वमा रहेका सम्पूर्ण शास्त्रहरुको ज्ञान र कुनै पनि भाषाको जानकारी हुनु के कुनै सामान्य मानिसमा सम्भव छ ? भूत, भविष्य र वर्तमान बताउने बालगुरू आदित्य ७२÷७२ घन्टासम्म अन्न, जलमात्र होइन श्वास–प्रश्वाससमेत नियन्त्रण गरेर बस्न सक्ने अद्भुत क्षमता राख्छन् ।
हिजोआज ध्यान विश्वव्यापी आवश्यकता बनेको छ । खाना शरीरको आहारजस्तै ध्यान चेतनाको आहार हो । ध्यानकुण्ड, ज्ञानकुण्ड र मोक्षकुण्ड निर्माण गरी सबैलाई त्यस मार्गमा हिँडाउने मेरो लक्ष्य हो भन्ने आशयका पर्याप्त अभिव्यक्ति बालगुरूका छन् । बालज्ञानी आदित्य बेलाबेलामा अज्ञातवास ध्यान र साधनामा गइरहन्छन् । ज्ञान प्रकट भएपश्चात् विगत चार वर्षमा गुरू आदित्यले ध्यान, योग, साधना र समाधिमाथि अनेकौँ प्रयोग गरिसकेका छन् । ध्यान समाधिका केही गम्भीर र गुप्त प्रयोग पनि उनबाट सम्पन्न भएका छन् । साथै ध्यान, साधना र योगका क्षेत्रमा अनेकौँ मार्गदर्शन एवं युगसापेक्ष सूत्रसमेत दिएका छन् ।
उनका सन्देशहरु ‘कुकर्म गरी याचनाका लागि ईश्वर खोज्दै हिँडेको देख्दा दया जाग्छ, सत्कर्म गरी परमात्मालाई आफ्नै हृदयमा सजाउन सकिन्छ । धन प्राप्तिमा भन्दा ज्ञान प्राप्तिमा समय व्यतीत गरौँ । लोभ र मोह त्याग, मेरो होइन हाम्रो भन, प्राप्तीमा होइन कर्ममा विश्वास गर, दया र धर्म नछोड । अरुको सेवामा आफूलाई समर्पित गर । भक्ति गरौँ, श्रद्धा गरौँ, हृदयमा करूणामय प्रेम सिर्जना गरी एकचोटि आफ्नो मूल्यांकन आफैँ गरी हेरौँ, त्यसपछि हामीले आफूलाई परमात्माको सानिध्यमा अवश्य पाउने छौँ । बाध्यताभित्र लुकेको यथार्थ सत्य नबुझी मनोभावनाका भरमा कोही कसैलाई कहिल्यै शंका नगरौँ ।
उनी अनेक भाषा बुझ्छन् र लेख्छन् । उनको कलमले नछोएको कुनै क्षेत्र छैन । बालज्ञानी आदित्यद्वारा अभिव्यक्त उद्गार, विचार, वाणी, अनुभव र लेखनशैलीलाई विश्लेषण गर्दा उनको लेखन आध्यात्मिक क्रान्तिको विचारधाराले ओतप्रोत भएको पाइन्छ । उनका कुनै पनि विचारमा भेदभाव, असमानता, द्वन्द्वभाव, विरोधाभास र व्यक्तिवादको गन्ध छैन । सही चेतनाको ज्योति मस्तिष्कमा पु¥याउँदा मनमा बल्ने त्यो दिव्य प्रकाश नै ज्ञान हो । ज्ञानले विज्ञताको संज्ञा दिन्छ । आदर्शवान्, नैतिकवान्, सत्गुणी बनाउँदै भावनात्मक विचारलाई सकारात्मकरुपमा मात्र सोच्ने व्यवस्था ज्ञानले मिलाउँछ । अन्धकार, अन्धविश्वास तोड्नुका साथै हर रहस्यसँग पुग्ने साधन नै ज्ञान हो । भौतिक लोभलालचमा रूमल्लिएको यो संसारमा ज्ञान नै त्यो अमूल्य धन हो जो जति बाँड्यो त्यति भण्डारण हुँदै जान्छ । यस्तो सुपरिष्कृत शब्दबिम्बका साथ उच्चकोटिको भाषामा कलम चलाउने बालज्ञानीको शब्दसिद्घि जान्न उनको कृति नै पढ्नुपर्ने हुन्छ ।
मानवताविरोधी क्रूर अपराध
जलबिरे झरनामा पर्यटक वृद्धि